တချိန်က ကမ္ဘာ့အလှဆုံးကလေးများရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်များ - ONE DAILY MEDIA
တချိန်က ကမ္ဘာ့အလှဆုံးကလေးများရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်များ
ငယ်ရွယ်စဥ်ကပင် သူတို့ရဲ့ အလှတရားကြောင့် ကမ္ဘာကပင် အသိမှတ်ပြုခံရတဲ့ ကလေးတွေကို သင်မြင်ဖူးမှာပါ။သူတိုရဲ့ အလှတရားကြောင့် နေရာတစ်ခုရရှိခဲ့ကြပြီး အချို့ကတော့ အနုပညာလောကတွင် လှုပ်ရှားကာ အချို့ကတော့ သာမန်ဘဝအဖြစ်နဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခု ကျွန်တော်တို့ One Daily Pageမှ အချိန်က ကမ္ဘာ့အလှဆုံးကလေးဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူများရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(1) Lucky Blue Smith,23နှစ်
2. Lily Chee ,18နှစ်
3. Anna Zak,20နှစ်
4. Malina Weissman 18နှစ်
5. Yara Shahidi 21နှစ်
6. Peyton List 23နှစ်
7. Audreyana Michelle, 22 နှစ်
8. Thomas Kuc, 19 နှစ်
9. Mackenzie Foy, 20 နှစ်
10. Bella Harris, 21 နှစ်
11. Oona Laurence, 19နှစ်
12. Ekaterina Samsonov, 18နှစ်
13. Nikki Hahn, 18နှစ်
14. Harvey Petito, 18နှစ်
15. Fátima Ptacek, 21နှစ်
16. Thylane Blondeau, 20 နှစ်
အလှတရား သို့မဟုတ် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးက ဘဝကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများ ယူဆောင်လာပေးနိုင်လား။ ကလေး၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အလှတရားသည် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လား။သင်ရဲ့အမြင်ကို commentမှ ဆွေးနွေးပေးသွားပါအုန်းနောိ။
သူတို့ရဲ့ လိင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီး သင်လုပ်ချင်တာတွေအတွက် နောက်ကျတယ်မရှိဘူးဆိုတာ သက်သေပြခဲ့သည့် လူများ
အချိန်ခရီးသွားခြင်းကို သက်သေပြခဲ့သည့် celebrity(၁၅) ဦး